Dowladda Kenya oo Bandowga ku kordhisay Soomaalida Islii - BANDHIGA
Dowladda Kenya oo Bandowga ku kordhisay Soomaalida Islii
Dowladda Kenya ayaa waxay lix iyo toban maalmood oo hor leh ku kordhisay xaaladdii go’doominta ahayd ee horaantii bishan la geliyay xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi.
Mudadii hore oo shan iyo toban maalmood ahayd ayaa ku mudeysneyd maalin ka hor, waxaana amarkan cusub uu soo baxay, xilli Soomaalida Islii isu diyaarineysay in bandowga laga dulqaado.
Go’doominta la geliyay Islii ayaa ahayd inaanay cidina ka bixi karin, soona geli karin xaafadaasi, ka dib markii ay Dowladda Kenya sheegtay in laga diiwaangeliyay xaalado badan oo COVID-19 la xiriira.
Mutahi Kagwe, Wasiirka Caafimaadka Kenya ayaa Arbacadii sheegay in xaafadda Islii ay ku sii jiri doonto xaaladda gooni-yeelka ah, ka dib markii uu sheegay in taasi loo arkay mid qayb ka noqoneysa xakameynta COVID-19.
Amarkan ka soo baxay Xukuumadda Nairobi ayaa walwal xoogan ku abuuray Soomaalida Islii, waxaana uu ku soo aadaya, xilli ay isu diyaarineysay Ciidul Fitriga.
Soomaalida faraha badan ee ku dhaqan xaafadda Islii oo qaarkood Saxaafadda la hadlay ayaa walaac ka muujiyay mudada lagu kordhiyay go’doomintii ay ku jirtay xaafadaasi.
By : Press room Tags: Dowladda Kenya oo Bandowga ku kordhisay Soomaalida Islii
Olole Nadaafadeed oo laga bilaabay Muqdisho ka hor maalmaha Ciida
Wasiirka Cadaalada Puntland: Qof kasta Gurigiisa ha ku Tukado Salaada Ciida